पाहुनाहरू र के गर्नु हुँदैन?
परमेश्वरको महत्वलाई प्रश्न गर्दै
कुनै प्रकारको ईश्वर अवस्थित छ कि छैन वा प्रश्नको छैन जुन जरूरी समय पुरातत्व को दिमाग मा कब्जा गर्नु पर्छ। दस्तकहरु - विशेष गरी ईसाईहरु - नियमित रूप देखि तर्क र विचारहरु संग ईश्वरहरु को चुनौती को रूप मा मानिन्छ कि उनको भगवान निश्चित रूप देखि मौजूद छ। तर पहिले कि, ठेगाना गर्न एक अझ महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यहाँ छ: के हाम्रो जीवनमा ईश्वर साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ? पश्चातापले पहिलो स्थानमा कुनै देवताहरूको अस्तित्वलाई पनि हेरचाह गर्नु पर्छ?
यदि भगवानको अस्तित्व महत्त्वपूर्ण छैन भने, हामी निश्चित रूपमा हाम्रो समय बर्बाद गर्न बर्बाद गर्न आवश्यक छ। यो अपेक्षा गर्नु पर्छ कि विशेषज्ञहरू, र विशेष गरी मसीहीहरू, चाँडै भन्नेछन् कि तिनीहरूको ईश्वरीय अस्तित्वको प्रश्न साँच्चै महत्त्वपूर्ण रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यो तिनीहरूलाई असामान्य नहुने छैन कि यो प्रश्नले सबै अन्य प्रश्नहरूलाई मानवताले सोध्न सक्छ। तर सस्पिकिक वा गैर विश्वासकलापले उनीहरूलाई यो धारणा मात्र प्रदान गर्दैन।
दलितहरूले तर्क गर्ने प्रयास गर्छन् कि तिनीहरूको ईश्वर साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराले स्वाभाविक रूपले यसको सबै पक्षको सन्दर्भमा आफ्नो स्थितिलाई समर्थन गर्नेछ - जस्तै कि यो मानवताको लागि अनन्त मुक्ति प्रदान गर्दछ। यो जाने को लागी एक उचित दिशा जस्तो देखिन्छ, तर यद्यपि त्रुटिपूर्ण छ। निस्सन्देह उनीहरूले उनीहरूको ईश्वर महत्त्वपूर्ण छ भनेर सोच्छन्, र निस्सन्देह यो उनीहरूको नजिक हो र यो के गर्छ कि उनीहरूको नजिकको नजिक छ।
यद्यपि, यदि हामी यो तर्क स्वीकार गर्यौं भने, हामी एक विशेष सेट विशेषताहरू स्वीकार गरिरहनु भएको छ जुन अहिलेसम्म सत्य स्थापना भएको छैन।
यो सम्झना भएको हुनुपर्छ कि हामीले सोध्नुभएन भने उनीहरूको ईश्वरको विशेष गुणको साथमा महत्त्वपूर्ण छ। यसको सट्टा हामीले कुनै पनि ईश्वरको अस्तित्वलाई सोध्यौं भने, सामान्यतया बोल्ने, महत्त्वपूर्ण थियो।
यो धेरै फरक प्रश्नहरू छन्, र ती व्यक्तिहरूले कहिल्यै भगवानको अस्तित्वको बारेमा सोचेको छैन भनेर विश्वास गर्न सिकाउनुभएको छ भन्ने कुराले भेद देख्न असफल हुन सक्छ।
एक शंकास्पद पछि पछि निश्चित हुन सक्छ कि यदि केहि विशेषताहरु संग एक विशेष ईश्वर अवस्थित छ, त्यसपछि अस्तित्व महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ; त्यसोभए हामी देख्न सक्थ्यौं कि कुनै राम्रो कारणहरू हो कि यो कथित ईश्वर अवस्थित छ भन्ने विचार हो।
अर्कोतर्फ, हामी पनि सजिलै संग अनुदान दिन्छ कि केहि विशेषताहरु संग एक विशेष एल्फ छ भने, त्यसपछि अस्तित्व महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसोभए, किन प्रश्न हामी पहिलो स्थानमा एल्व्सबारे कुरा गरिरहेका छौं। के हामी बस ऊब छ? के हामी आफ्नो बहस गर्ने कौशल अभ्यास गरिरहेका छौं? उस्तै रिनमा, यो सोध्न योग्य छ किन हामी देवताबारे पहिलो स्थानमा कुरा गरिरहेका छौं।
सामाजिक आदेश र नैतिकता
एक कारण जो केहि विशेषज्ञहरु, खासकर ईसाईहरु, सोच को लागि प्रस्ताव गर्नेछन् कि भगवान को अस्तित्व को महत्वपूर्ण छ कि एक भगवान मा विश्वास को लागि राम्रो छ, वा पनि आवश्यक को लागि, सामाजिक क्रम र नैतिक व्यवहार। सयौं वर्षको लागि, ईसाई माफी मानेको तर्कले तर्क गरेको छ कि भगवानको कुनै विश्वास बिना नै आधारभूत सामाजिक ढाँचाहरू विच्छेद हुने गर्दछ र मान्छेले अब नैतिक रूपमा काम गर्ने कारण खोज्न सक्दैनन्।
यो एक शर्मिन्दा हो कि धेरै ख्रीष्टियनहरू (र अन्य विशेषज्ञहरूले यो तर्कलाई निरन्तरता दिन्छन् किनभने यो धेरै खराब छ। पहिलो बिंदु जो गर्नु पर्छ यो स्पष्ट छ कि तिनीहरूको ईश्वर राम्रो सामाजिक क्रम र नैतिक व्यवहारको लागि आवश्यक छ - संसारको अधिकांश संस्कृतहरु आफ्नो ईश्वरीय बिना ठीक देखि नै हुन्छ।
अर्को प्रश्न भनेको नैतिकता र सामाजिक स्थायित्वको लागी कुनै ईश्वरीय वा उच्च शक्तिमा विश्वास आवश्यक छ कि छैन। त्यहाँ कुनै पनि आपत्तिहरू जुन यहाँ बनाइएका छन्, तर म प्रयास गर्नेछु र केहि आधारभूतहरू छोडिदिनेछु। बिन्दुको लागि सबै भन्दा स्पष्ट कुरा यो हो कि यो कुनै पनि तर एमान्दार छैन, र अनुभववादी साक्ष्य यसको विरुद्धमा स्पष्ट छ।
इतिहासको एक परीक्षाले यो स्पष्ट पार्दछ कि देवताहरूमा विश्वासीहरू धेरै हिंसक हुन सक्छन्, खासकर जब यो विभिन्न विश्वासीहरूलाई पछ्याउने विश्वासीहरूका अन्य समूहहरूमा आउँछ। पाहुनाहरू पनि हिंसामा छन् - तर तिनीहरूले पनि धेरै असल र नैतिक जीवनको नेतृत्व गरेका छन्। यसकारण देवताहरूको विश्वास र असल व्यक्तिको बीच कुनै स्पष्ट सम्बन्ध छैन। जस्तै स्टीवन वेन्बर्गले आफ्नो लेख डिजाइनर ब्रान्डमा टिप्पणी गरे:
धर्म बिना वा बिना, असल मान्छेले राम्रो व्यवहार गर्न सक्छ र खराब मान्छेले खराब गर्न सक्छ; तर असल मानिसहरूको लागि दुष्ट गर्न - जसले धर्म लिन्छ।
अर्को रोचक तथ्य बिन्दु हो कि दावी वास्तवमा कुनै पनि ईश्वर को वास्तव मा अस्तित्व को आवश्यकता छैन। यदि सामाजिक स्थिरता र नैतिकता केवल ईश्वरीय ईश्वरीय ईश्वरीय विश्वासी मार्फत प्राप्त भएको हो भने त्यसवादीले दावी गर्दै आएको छ कि मानव समाजले ठूलो जीवनलाई बचाउनको लागि ठूलो धोका दिन्छ। यसबाहेक, कमजोरीले तर्क गरेको छ कि समाजले वास्तवमा आफ्नो ईश्वरलाई चाहिँदैन, किनकि कुनै पनि ईश्वरले स्पष्ट रूपमा गर्नेछ। मलाई यकीन छ कि केही विशेषज्ञहरू त्यहाँ छिटो यससँग सहमत हुनेछन् र परेशान भएन, तर तिनीहरू दुर्लभ हुन्छन्।
तथापि, एक अधिक मौलिक आबादी मानवता को स्पष्ट चित्रण हो जुन यस्तो दावा गर्दछ। मानिसलाई कुनै ईश्वरीय कारण चाहिन्छ किन ईश्वर नैतिक हो कि तिनीहरू आफ्नै सामाजिक नियमहरू सिर्जना गर्न सक्षम छैनन् र यसैले अनन्त शासनको आवश्यकता पर्दछ जसले अनन्त इनाम र अनन्त सजायहरू दिन्छ।
एक किसिमले सम्भवतः यो दाबी गर्न सक्छ जब चिमपेजहरू र अन्य प्राइमेटहरू स्पष्ट रूपमा सामाजिक नियमहरू बनाउन सक्षम हुन्छन्? दस्तक हामी सबै भन्दा बाहिर अनजान बच्चाहरू सिर्जना गर्न प्रयास गर्दैछौं। उनीहरूको आँखामा, हामी स्पष्ट रूपले हाम्रो आफ्नै काम चलाउन असक्षम छौं; खराब अझै, अनन्त इनामको मात्र प्रतिज्ञा र अनन्त दण्डको खतराले हामीलाई रेखामा राख्नेछ। सायद यो वास्तवमा तिनीहरूका साँचो हो, र यो दुर्भाग्यवश हुनेछ। यद्यपि, यो थाहा पाउने कुनै पनि कुरा होइन भन्ने कुरा होइन।
अर्थ र उद्देश्य जीवनमा
एक सामान्य कारण तर्क गर्नुको अर्थ हो कि परमेश्वरको अस्तित्व हाम्रो लागि सान्दर्भिक छ कि एक जीवन जीवन मा उद्देश्य वा अर्थ आवश्यक छ।
निस्सन्देह, ईश्वरहरू सुन्नु भनेको सामान्य कुरा हो कि ईश्वरीय ख्रीष्टियन ईश्वर बिना जीवनको कुनै पनि प्रकारको अर्थ वा उद्देश्य हुन सक्दैन। तर के यो सत्य हो? के केहि ईश्वर वास्तव मा एक जीवन मा अर्थ र उद्देश्य को लागि एक शर्त छ?
म ईमानदारी देखि नहीं देख्न यो कसरि हुन सक्छ। पहिलो स्थानमा, यो तर्क हुन सक्छ कि एक भगवान अवस्थित भए तापनि, त्यो अस्तित्वले व्यक्तिको जीवनको अर्थ वा उद्देश्य प्रदान गर्दैन। मसीहीहरूले आफ्नो ईश्वरको इच्छाको सेवा गरिरहनु भएको कुराले तिनीहरूलाई के उद्देश्य दिन्छ? तर म यो सोच्न सक्दिन कि यो प्रशंसनीय छ। मनन रहित आज्ञाकारी कुत्ते र अन्य पशुपक्षी पशुहरूमा प्रशंसनीय हुन सक्छ, तर यो पक्कै वयस्क परिपक्व मानव मानिसहरूमाथि धेरै मूल्यको होइन। यसबाहेक, यो बहस योग्य छ कि कुनै ईश्वर वा होइन जुन त्यस्तो अनौपचारिक आज्ञा पालन गर्न पहिलो स्थानमा कुनै आज्ञाकारिताको योग्य छ।
यो ईश्वरले सृष्टि गर्नुको अर्थ हो हामीलाई जीवनमा एक उद्देश्य पूरा गर्न आज्ञाकारिताको सिद्धान्तलाई औचित्य गर्न प्रयोग गरिएको छ; तथापि, यो प्रस्ताव जुन कुनै सृष्टिकर्तालाई यो चाहान गर्न को लागी एक रचनाकार स्वतः स्वतन्त्र छ, जसले समर्थन आवश्यक छ र हातबाट स्वीकार्य हुँदैन। यसको अतिरिक्त, यो जीवनमा पर्याप्त उद्देश्यको रूपमा सेवा गर्न दावी गर्न को लागि एक राम्रो सौदा समर्थन आवश्यक हुनेछ।
निस्सन्देह, सबै यो मानिन्छ कि हामी स्पष्ट रूपमा सिर्जनाकर्ता सिर्जनाको इच्छा बुझ्न सक्छौं। मानव इतिहासमा केही धर्महरू प्रायः सृष्टिकर्ता-ईश्वरको अस्तित्वलाई ठान्नुभएको छ, तर तिनीहरूमध्ये कोही पनि धेरै सम्झौता पाउन सकेनन् कि त्यस्तो सृष्टिकर्ता-परमेश्वरले हामीलाई मानवबाट चाहनु भएको हो।
धर्मभित्र पनि, परमेश्वरको उपासनाको चाहनाको रूपमा रायको विशाल विविधता छ। यो जस्तो देखिन्छ कि यदि त्यस्तो ईश्वरीय अस्तित्व थियो, यसले सम्भवतः त्यस्तो गल्ती काम गरेको छैन जसको यो भ्रमले अनुमति दिन्छ।
म यस परिस्थितिबाट कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छु यदि कुनै प्रकारको सृष्टिकर्ता-ईश्वर अवस्थित छ, यो सम्भव छैन कि हामी हामीलाई यो के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, सबै कुरा भने। यो परिदृश्य जुन खेलिरहेको छ कि मानिसहरू आफ्नै उपासना र डरहरूलाई जुनसुकै उपासना गर्छन् उनीहरूको पूजा गर्छन्। आधुनिकतालाई डर र नम्रता गर्ने व्यक्तिले उनीहरूका ईश्वरमा र परिणामस्वरूप, एक देवतालाई खोज्छन् जुन उनीहरूको डर र घृणामा रहन चाहन्छन्। अरू परिवर्तनहरू र अरूलाई माया गर्न मनपर्ने खुला र खुसी छन्, र यसैले एक भगवानमा पाइन्छ जुन परिवर्तन र विविधताको सहनशीलता हो, र उनीहरूको रूपमा जारी राख्न चाहन्छ।
यद्यपि पछिल्लो समूह समय बिताउन बढी सुखद छ, तिनीहरूको स्थिति वास्तवमा पूर्व भन्दा राम्रो स्थापित छैन। सोच्नुको कुनै कारण छैन कि त्यहाँ एक ध्यानाकर्षण र मायालु सृष्टिकर्ता-देवता हो भन्दा यसको तुलनामा एक अर्थ-उत्साहित र डरलाग्दो सृष्टिकर्ता-ईश्वर हो। र, कुनै पनि अवस्थामा, कुन भगवानले हामीबाट चाहानुहुन्छ - यदि खोज्न सक्दछ - स्वचालित रूपमा हामीलाई हाम्रो जीवनमा उद्देश्य प्रदान गर्न सक्दैन।
अर्कोतिर, यो सजिलै बहस छ कि जीवनमा अर्थ र उद्देश्य खोज्न तयार छ - साँच्चै, सृष्टि - अस्तित्वको बिना, कुनै पनि प्रकारको ईश्वरमा धेरै कम विश्वास। तिनीहरूको हृदयमा अर्थ र उद्देश्य मूल्यको आवश्यकता छ, र मूल्य व्यक्तिगत व्यक्तिसँग सुरु हुनुपर्छ। यस कारणको लागि, ती व्यक्तिमा पहिलो र अग्रणी अवस्थित हुनु पर्छ। हामीमध्ये बाहिर (अन्य देवहरू समेत) अरूलाई सम्भावित बाटोहरूको सुझाव दिन सक्छ जहाँ अर्थ र उद्देश्य सम्भव हुन सक्छ, तर अन्ततः यसले हामीलाई निर्भर गर्नेछ।
यदि एक देवता को अस्तित्व वास्तव मा हामी कसरी हाम्रो जीवन कसरी जीवित गर्न प्रासंगिक छैन र एक राम्रो व्यक्ति हुनु आवश्यक छैन, फेरि कुनै पनि भगवानको अस्तित्व बहस गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। तपाईले केहि विशेष ईश्वरको अस्तित्वमा बहस गर्न चाहानुहुन्छ कि समय वा बहस गर्ने कलाहरू सुधार्नु, तर यो देखा पर्नेछ कि ती सुनेकाहरू अझ बढी प्रभावकारी प्रतिक्रिया हो "तपाईं परमेश्वरमा किन विश्वास गर्नुहुन्न?" "पहिलो स्थानमा देवताहरूको किन ख्याल राख्नुहुन्छ?"
त्यसोभए, कुनै देवता अवस्थित हुन सक्छ कि? हुनसक्छ, सम्भव छैन। केही विशेष ईश्वरले यसको गुण र मनसायमा आधारित, महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यद्यपि, यहाँ मान्यता प्राप्त बिन्दु यो हो कि यो स्वचालित रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन जुन अवस्थित कुनै पनि भगवान जरूरी छ । यो पूर्णतया कम्युनिटी संग पूर्णतया पुग्छ जसले पहिलेको व्याख्या गर्दछ कि किन र उनीहरूका ईश्वरले हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्नु अघि हामी यो भन्दा अस्तित्वको लागि निर्धारित समय प्रयोग गर्दछौ कि यो पनि अवस्थित छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक कठोर आवाज हुन सक्छ, हामी वास्तवमा कुनै जीवनको कुनै सम्बन्ध छैन जब अवस्थित केहि विचार विचार गर्न कुनै दायित्व छैन।
तपाईंको आस्तित्व प्रकट गर्दै
कस्तो प्रकारको धर्म ईसाई धर्म हो?
किन र ईश्वरीय विज्ञान धर्मलाई सुदृढ छ
डार्क साइड अफ अमेरिकन ड्रीम
सीएस लुईस र नैतिकता तर्क
विश्वास अविश्वसनीय छ: विश्वास ज्ञानको स्रोत होइन
"भगवानको अधीनमा" बफादारको बखतमा हुनुपर्दछ
तपाईं अविश्वसनीय हुनुहुन्छ भने क्रिसमस मनाउने कसरी
धुम्रपान जादू ट्रिक - धुम्रपान फिंगर
माउड गोनन: आयरिश प्याटटेरिया जसले इन्स्पेडर्ड यूट '' कुनै दोस्रो ट्रय '
अमेरिकी विधान प्रक्रिया अनुसार कसरी बिलहरू बन्नु हुन्छ
उनीहरूको गोल्फ स्कोरिङ सर्तहरू (Birdies, बोगे, पार्स) के हो?
क्यालिडाड बनाम Cualidad
T4 स्लिप्स र क्यानाडा आयकर स्लिप्स
Hangover Remedies र Prevention
ठूला संख्या बुझ्न
हारेम को हुन्?
शब्दहरू प्रयोग गर्न भावनाहरू छलफल गर्न
अनियमित दोस्रो विनाश इटालियन क्रिया
Rey Mysterio प्रोफाइल
एमेच्योर बनाम व्यावसायिक कलाकार:7प्रश्नहरू आफैलाई सोध्न
चट्टानमा 11 विभिन्न प्रकारका होलहरूको नामहरू
लेवीको पुस्तकको परिचय
स्कीइङ हुँदा तपाइँको खुट्टालाई ज्यान राख्नुहोस्
भाषाशास्त्रमा के छ?
केन्टकी विद्यार्थीहरूका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरू, K-12 नि: शुल्क सूची
जेसन क्रबब जीवनी
गिटारमा सातौं शब्दहरू सिक्दै
भाषण कसरी लेख्नुहुन्छ?
कसरि कन्जेगेट "एडोवर" (अडौर मा)
कस्ता रंगहरू सुन र सुनको चित्रण गर्न प्रयोग गर्छन्
5 - हायरफैंन्ट
बिंगो: खेलको इतिहास